Ucela uxhaso ophase ngamalengiso | News24
Ucela uxhaso ophase ngamalengiso
ISITHOMBE : SithunyelweNqobile Nzimande.
UMFUNDI waseTaylors Halt obenza umatikuletsheni uthi ukusebenza kanzima yikhona okumsizile ukuthi akwazi ukuphumelela ngamalengiso ezifundweni zakhe zakamatikuletsheni.
UNqobile Nzimande (16) obefunda e-St Paul John uhlomule o-A abayi-7 ezifundweni okubalwa kuzona i-Physical Science, Life Orientation, Economics, IsiZulu, English, Life Sciences kanye ne-Mathematics nathole u-100% kuyona.
Uphinde waphuma isibili kuzwelonke ezikoleni ezibizwa ngokuthi yi-Quintile 2.
Ekhuluma ne-Echo, uNqobile uthe ubengazitsheli ukuthi angaphumelela kahle kangaka. Uthe ngesikhathi efunda yena wayefundela ukuthi akwazi ukuthola imiphumela ezokwazi ukuthi imfake enyuvesi nje kuphela.
“ Ngisebenze kanzima nangokuzikhandla ukuthi ngize ngikwazi ukuthola le miphumela engiyitholile. Bengithi umangibona ukuthi into iyangihlula, ngiphumele ngaphandle ngihambe ngiyofuna usizo. Bengingafeli ngaphakathi,” kubeka yena.
UNqobile uthe ufuna ukuyokwenza izifundo ze-Actuarial Science eNyuvesi yaseKapa kanti usesitholile nesikhala kodwa inkinga akanayo imali yokukhokhela izifundo zakhe.
“Njengamanje awukho umfundaze engisawutholile kanti futhi nesicelo sami engesifaka esikhwameni soxhaso lwabafundi u-National Student Financial Aid System (Nsfas) besingakaphendulwa. Nginethemba lokuthi ngizokwazi ukuthi ngithole umfundaze okanye ngithole uxhaso ukuze ngizokwazi ukuqhuba izifundo zami,” kubeka yena.
Uqhube wathi kubalulekile kubafundi bakamatikuletsheni bakulo nyaka ukuthi bazimisele kusasuka bangalindi izivivinyo zokuphela konyaka.
“Uma uqale wazimisela wathola imiphumela emihle kusaqala unyaka bese wenza isiqiniseko sokuthi njalo uyakhula ekwenzeni kahle konke kuzohamba kahle. Ungazigqilazi kakhulu uma ufunda kodwa okubalulekile nje ukuthi ukwazi ukulawula isikhathi sakho kahle.”
Unina kaNqobile, uNkk Phumzile Nzimande uthe bajabula kakhulu ngemiphumela yendodakazi yabo kanti futhi bayaziqhenya ngayo.
“Usebenze kanzima. Uma esebheke incwadi ubenza isiqiniseko sokuthi akayibeki phansi engakayazi lento ayifundayo.Into nje esikhathaza kakhulu ukuthi asazi ukuthi uzoziqhuba ngani izifundo zakhe uma kungukuthi akawutholi umfundaze.
“Siyacela kunoma ubani ongakwazi ukuthi asize alekelele ngemali yokukhokhela izifundo zakhe ukuba alule isandla. Ngokwenza njalo uzobe engenzeli nje uNqobile okanye thina kuphela, kodwa uzobe enzela isizwe sonke ngoba uzofunda akhule alekelele isizwe,” kubeka yena.